Xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo katirsanaa baarlamaanka Puntland oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax gaari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo katirsanaa baarlamaanka Puntland oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax gaari
March 19, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Xildhibaanka geeriyooday, Cabdiqaadir Faarax Bootaan. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo katirsanaa baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar qarax oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo bilowgii bishaan, sida saraakiil katirsan baarlamaanka Puntland u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Waxa uu ku dhintay isbitaal kuyaala gudaha caasimada Kenya ee Nairobi, halkaas oo lagu siinayay daaweyn caafimaad maalmihii lasoo dhaafay.
Waxa uu si daran ugu dhaawacmay markii qarax loogu xiray gaarigiisa uu ku qarxay 8-dii bsihaan Maarso gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas ilaa iyo hadda, balse tuhunka ayaa ku dhacaya ururka hubaysan ee Al-Shabaab, kuwaasoo weeraro kan lamid horey u qaaday oo ka dhan ah saraakiisha dowladda Puntland.
Waraaq tacsiyeed ay soo saareen baarlamaanka Puntland maanta oo Axad ah, guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Cabdisalaam Ciise ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan.